कांग्रेसमा बढ्यो चुनावी सरगर्मी : रामचन्द्र भेट्न बोराटार पुगे शेखर « Palpalkhabar
कांग्रेसमा बढ्यो चुनावी सरगर्मी : रामचन्द्र भेट्न बोराटार पुगे शेखर
१४ असार २०७८, सोमबार १४:०१
काठमाडौं । कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन नजिकिएसँगै नेतृत्वका आकांक्षीहरूको भेटघाट बाक्लिएको छ। सोमबार वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइरालाबीच भेटवार्ता भएको छ।
पौडेल निवास बोराटारमा भएको भेटमा दुवै नेताले पार्टी सभापतिको आकांक्षा व्यक्त गरेका थिए । कोइरालाले पार्टीको १४औं महाधिवेशनमा सभापति पदमा आफूलाई समर्थन गर्न वरिष्ठ नेता पौडेललाई आग्रह गरेका हुन्। भेटमा पौडेलले सभापति बन्ने इच्छा राख्दा नेता कोइरालाले आफूलाई सभापतिमा सहयोग गरेर प्रधानमन्त्री बन्न सुझाएका थिए। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नेतृत्वमा दोहोरिने बताइसकेका छन् भने संस्थापन समूहमै रहेका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले पनि सभापतिमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरिसकेका छन्।
वरिष्ठ नेता पौडेलले लामो राजनीतिक यात्रामा सधैं निष्ठापूर्वक काम गरेको भन्दै एकपटक सभापति बन्ने इच्छा रहेको बताएका थिए। तर, कोइरालाले आफूले १३औं महाधिवेशन लगत्तै सभापतिमा उम्मेदवारी दिने तयारी गरिसकेकाले पछाडि फर्कन नसक्ने जवाफ दिएका थिए। ‘तपाईंहरुको उमेर, अनुभव र निष्ठाको राजनीतिका कारण प्रधानमन्त्री बनेर योगदान दिनुस्, तपाईंलाई आउने आम निर्वाचनमा पार्टीकातर्फबाट प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएर अगाडि बढाउन तयार छु,’ कोइरालाले पौडेललाई भनेका छन्।
आकांक्षी धेरै भएकाले सहमतिमै नेतृत्व चयन गर्न नेताहरुबीच अनौपचारिक छलफलले तीव्रता पाएको हो। सोमबार दिउँसो केन्द्रीय सदस्य सुजाता कोइराला निवासमा वरिष्ठ नेता पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासहितको लञ्च मिटिङ भएको थियो। संस्थापन इतर समूहबाट पनि वरिष्ठ नेता पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइराला, पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह, केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइराला, सुजाता कोइराला र कल्याण गुरुङले सभापतिमा उम्मेदवारी दिने बताउँदै आएका छन्।
#कांग्रेसमा बढ्यो चुनावी सरगर्मी